Kosta Rika : Miaro Ny Tontolo Iainana Ve Ny Toeram-Pitrandrahana Mitafo Lanitra? Tsia, Hoy Ireo Blaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2018 15:12 GMT
Tontolo iainana voakapan'ireo fanapahana hazo sy ny fandringanana ala avy amin'i hypertypo
Nampiaka-peo ireo blaogera ao Kosta Rika nampaneno ny lakolosim-panairana hanoherana ilay fanapahankevitry ny governemanta hamela tetikasa iray hanapaka ala aminà hektara maro ho an'ny toeram-pitrandrahana volamena mitafo lanitra ao akaikin'ny sisintany iarahany amin'i Nikaragoa. Ny filoha Oscar Arias, ilay nahazo ny loka “Prix Nobel de la Paix”, izay tsy ela fa vao tamin'ny herintaona, no nanambara ampahibemaso ny tetikasa famitranam-pihavanana amin'ny natiora izay natao hiarovana ny alan-javaboary ao Kosta Rika, izy indray ankehitriny no manambara fa hahazoan'ny firenena tombontsoa amin'ny famoronana asa ilay fitrandrahana mitafo lanitra, ary antitranteriny fa efa nisahana ny toy izao tamim-pahombiazana tany amin'ny firenena hafa ilay orinasa kanadiana hiandraikitra ilay fitrandrahana.Soa ihany fa nilaza ireo mpiaro ny tontolo iainana fa ny fandringanana ala izay tsy maintsy hisy eo amin'ilay faritra hitrandrahana, sy ho lozabe ho an'ny tontolo iainana ny fikirakirana ara-simika hampisarahana ilay vy mavo sy ny poti-javatra hafa, indindra indrindra fa manakaiky ny renireno lehiben'i San Juan ilay toeram-pitrandrahana.
Jaguar des Platanar, monina ao San Carlos, akaikin'ilay toerana ao Crucitas izay hisian'ny fitrandrahana, no nanoratra hoe (amin'ny teny Espaniola avokoa ny rohy rehetra) :
Momba ilay raharaha Crucitas, nanadihady an'i Arias i Amelia Rueda [mpanao gazety Kostarikana] androany. Nolazainy fa nandray fanapahankevitra hanasonia ilay didim-panjakana izy satria “ny olon-drehetra” samy milaza zavatra tsara momba ilay tetikasa avokoa: ny Ben'ny tanànan'i San Carlos, ilay Solombavambahoaka Salvador Quiros, Roberto Dobles, ireo mpahay lalàna avy amin'ny MINAE [Ministeran'ny Tontolo iainana sy angovo], SINAC, SETENA ary [ireo sampana] momba ny Jeolojia sy ny Harena Ankibon'ny Tany. Ary koa satria «eken'ny ankamaroan'ny mponina ao San Carlos» ny hampandeha ity tetikasa ity noho izy io misy fiaikena hanorina làlambe, famerenana ny voly hazo indray ary hamokatra asa maro […]. Mazava ho azy fa tena marina ny filazàna hoe manaiky ilay toeram-pitrandrahana ny ankamaroan'ny ao San Carlos, toy ny filazàna hoe tena tsy misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana ny cyanure .
Fuera de Crucitas dia blaogy iray noforonina manokana hanoherana ilay fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao amin'ny faritr'i Crucitas. Mampahafantatra ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny fivoaran-draharaha tany aloha momba ny harena ankibon'ny tany izy, ary manangona sonia manohitra ny fisokafan'ilay toeram-pitrandrahana volamena sy mandà tanteraka ilay fandripahana tsy an-kitsitsy ilay ala mikitroka nitranga nandritra ny telo andro taorian'ny nandaniana ilay didim-panjakana. Ny Alatsinainy lasa teo, nampiato ilay tetikasa ny Minisitry ny Tontolo iainana mandritry ny fotoana handinihana ilay raharaha :
Mino izahay fa ireny sonia ireny no maneho ny fihetsempon'ny mponina eo anatrehan'ireo asa nisy tato anatin'ny andro vitsy lasa izay, izay nikapàna hazo maro tao Crucitas ao Cutris, taorian'ilay didim-panjakana nanome alalana hikapà hazo, na dia ireo hazo tsy azo tapahana aza, toy ny Hazonà Amandy mavo.
Ilay mpanao gazety Cristian Cambronero, avy ao amin'ny Fusil de Chispas, no nanoratra lahatsoratra amin'ny antsipirihany mikasika ilay resaka no sady koa mikasika ireo fifanoherana tsikaritra anatin'ny politikan'ny Filoha, mitondra ny lohateny hoe «Famitranam-pihavanana amin'ny natiora, mbola resaka mampatory mitsangana indray» :
‘Ndao haverina jerena. Ny volana Jolay 2007, nanolotra ny «Famitranam-pihavanana amin'ny natiora» ny governemantan'ny Filoha Arias, tetikasa lehibe iray izay tokony hiarahanà ekipa 175 matihanina misalahy, natao hametraka an'i Kosta Rika ho “mpitarika erantany amin'ny resaka fikajiana tontolo iainana”. Lasa tetikasa iray andrian'ny fon'ny Filoha mila aseho na aiza na aiza, ary nankalazain'ny mpanao gazety. Vao herintaona monja taty aoriana, ny herinandro lasa teo, io Filoha io ihany no nanao sonia didim-panjakana manambara ny “tombotsoam-pirenena sy ny mampety ny firenena” ny fandripahana ala mirefy 262 hektara ao Crucitas ao Cutris, any San Carlos, akaikin'ny sisintany iarahana amin'i Nikaragoa. Io fandripahana ala io sy ilay didim-panjakana dia manome làlana ihany koa ny fitrandrahana ilay “harenan-kibon'ny tany ara-tontolo iainana” ao Las Crucitas, izay tsy hafa fa toeram-pitrandrahana iray mitafo lanitra ho fanadiovana (hanasàna) ny tany amin'ny alalan'ny cyanida misy poizina ho fitadiavana volamena. Fampihorohoroana ara-tontolo iainana.
Entin’ i Cristian isika ho any aminà lahatsary vitsivitsy amin'ny teny Espaniola ao anaty Youtube, nampiakarin'i Sancarlena77, mampiseho ny fahapotehana entin'ireo toeram-pitrandrahana mitafo lanitra. Ampahany Voalohany sy ampahany faharoa.
Tao amin'ny tolotry ny blaogy bitika ao amin'ny Twitter, maro ireo mpampiasa no nizara rohy mankany aminà fanadihadiana nataonà televiziona mampiseho ny halehiben'ilay fandringanana ala, nisy koa lahatsary iray hafa, izay nanakambanana ny fanambaran'ny Filoha Arias herintaona lasa izay sy ny toe-draharaha ankehitriny.
Ilay fandaharana Evaverde ao amin'ny Canal 15 izay an'ny Oniversiten'i Kosta Rika koa dia nanao lahatsary maharitra 10 minitra manazava ilay raharaha ao las Crucitas nanomboka ny volana Aogositra lasa teo, ary nampifanakaiky izany amin'ny vokatra ratsy azon'ny governemanta tamin'ny fanarahamaso ireo toeram-pitrandrahana volamena mitafo lanitra, indrindra indrindra ny ao Miramar, ny fanapoizinana rano fisotro noho ny cyanure sy ny fihotsahan'ny tany dia tsy inona fa mbola ampahany fotsiny amin'ireo fiantraikany ratsy hita amin'ilay asa (Iray minitra aorian'ny fanombohan'ilay lahatsary no misy ny momba io resaka io ) :